Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » I-Kia Niro entsha yenza i-World Debut
I-Kia Corporation iveze i-Niro entsha namuhla okokuqala ngqa ku-2021 Seoul Mobility Show, okuhloswe ngayo ukwenza ukuhamba okuzinzile kufinyeleleke kuwo wonke umuntu.
I-Niro entsha ihlanganisa ukuzibophezela kuka-Kia ekwakheni ikusasa elisimeme. Njengengxenye ebalulekile yomugqa okhulayo we-eco-friendly we-Kia, imodeli entsha izoheha izidingo eziyinkimbinkimbi zabathengi abaqaphela ukusimama.
Iklanywe kabusha ngokuphelele kusukela phansi kuya phezulu, i-Niro entsha ithuthukiswe ngaphansi kwefilosofi yenkampani ye-Opposites United design, egcwalisa izimiso ze-'Joy for Reason'. Kudinga ugqozi oluvela emvelweni hhayi ekwakhiweni kuphela kodwa nasekukhetheni umbala, impahla kanye nesiphetho ukushaya ukulingana okuphelele phakathi kwendlela ebhekele imvelo kanye nombono obheke esikhathini esizayo.
Ithonya elinamandla lomqondo we-Habaniro ka-2019 libonakala ekwakhiweni kwangaphandle kwe-Niro ngokubukeka kwayo okunesitayela nokugqamile kwe-crossover kanye nobuchwepheshe obuphezulu bomzimba wethoni emibili. Insika ebanzi ngemuva ithuthukisa ukugeleza komoya ukuze kuthuthukiswe i-aerodynamics futhi ihlangane namalambu angemuva amise okwe-boomerang.
Isiginesha ye-Kia 'ubuso bengwe' isiguqulelwe ku-Niro entsha futhi manje isuka ku-hood, idlulele ku-fender emangelengele ngezansi. Idizayini yangaphambili yesimanje iqedwe nge-'heartbeat' LED DRL (ama-daytime running lights) adala ukuzethemba nokubukeka okumangalisayo emgwaqeni.